दिल महरा | माघ ४, २०७६ शनिबार | 0
जुम्ल्या भाइहरुले बटुकाको भात छोडेर थालमा भात खानका लागि झगडा गर्ने भए। अनि, एक दिन कालो सुँगुरको एउटा पाठो बेच्नुभो बाले। दुइवटा सिलबटको नयाँ थाल किन्न भनी।
बा, अर्को दिन बिहानै गुजुरे बजार जानु भो। थानाभन्दा उत्तरतिरको ढक्कल पसलबाट। हाम्रो घरमा सिलबटको दुइवटा नयाँ थाल आयो। जुम्ल्या भाइहरु धेरै खुसी भए।
म आठ/नौ बर्षकी हुँदी हुँ। हाम्रो घरमा बाआमा, बाजेबज्यै, दिदी, दुइटा भाइ र म थियौं। डेक्चीमा साँझ बिहान दुइपटक मात्र भात पाक्थ्यो हाम्रो घरमा। कराइभरि झोल हुने तरकारीमा पिरो बढी हुन्थ्यो। हामी सबैले मीठो मानी खान्थ्यौं। कुनै–कुनै दिन खाइ नसकेको जुठो भात। थालसँगै लुकाएर राख्थें मैले। भोक लाग्दा खाने भनी।
तर, लुकाएको भात भोक लाग्दा हुन्थेन। कहिल्यै पनि थालमा। लुकाएको ठाउँ वरिपरि खोजिरहन्थें मैले। भात भेट्दिनथें। थाल रित्तै हुन्थ्यो। त्यसपछि खुब रुन्थें म। आमाको हात समाउँदै। चिच्चाइ–चिच्चाई। आमाले मेरो आँसु पुछि दिदै भन्नुहुन्थ्यो।
‘भुट्वा भात खाइस्याकल । जिन रोओ । जिन रोओ ।’
‘भुख लागि ट खइम कहिके ढैलक म्वार डुठा भात । खइया भुट्वा मर्जाइस ! आबह् मरजाइस ।’
‘डाई हमन भुख लागटा ! भुख लागटा ।’
घरबाट निस्केर कहाँ हिडिहाली दिदी ? भाइहरु भोक लाग्यो भनेर रोकोरोइ थिए । मलाई नि खुब भोक लागेको थियो । तर म रोइनँ । भाइहरु रोएको देखेर खुब टीठ लाग्यो । थाकिसकेका थिए भाइहरु रोइ–रोइ । सानो भाइ बैठक कोठामा लम्पसार थियो चुप लागेर । ठूलो भाइ भान्साकोठामा घुक्क–घुक्क गरिरहेको थियो उत्तानो परेर। एकछिनपछि दिदी आइछे। दिदीले मलाई आँगनबाटै बोलाई।
‘जुनु आगी बार ट । हाली बार ट ।’
दिदीले चारवटा मकैको घोगा छोपछाप पारेको रुमालबाट झिकी । मैले निधारमा पसिना आउने गरी आगो फुके । पुत्ताउँदै गरेको गुइठाबाट धिपधिप गरेको आगो बल्यो । दिदीले दुइरतीनवटा सिसौको साना–साना दाउरा भाँचेर जोरी । आगो घन्कियो ।
मकै पड्किन थालेपछि सानो भाइ आयो । कराइबाट उछिट्टिएर भूइँमा खसेको पहिलो मकै सानो भाइले नै मुखमा हालेर चपायो । अर्को गेडा ठूलो भाइले खोसेर घुरुम पा¥यो। एउटा मैले नि चपाए । कस्तो मीठो भयो । सानो भाइले म धेरै खाने हुँ भनेर दिदीलाई हेर्दै हाँस्यो ।
साँझ घरमा भात पाक्यो । सबैले भात खाँदै थिइम् । बुझौनाको बा सरासर घरभित्र आए। दिदीलाई दुई झप्पु हिर्काए । बोल्दै नबोलेर । दिदीले मुखभित्रको भात हुलहुलु वाकी । कोही बोलिनम् हामी । जाने बेला बुझौनाका बाले बातिर फर्केर भनेका थिए–
‘टै गरिब ! त्वार छाइ म्वार गठ्वमसे चार ठ्वाठा क्वक्न्नी चोरडिहल । टै सस्सुर । टै गरिब ।’
अधिकारी बाजेको घरबाट लिएको चार कोसा मकै । आमाले बिहानै बुझौनाको बालाई लग्दिनु भो । त्यसदिन बाले सुँगुरको सानो चाहिँ पाठा काट्नु भो । भाइहरु मासु खाने कुराले निकै खुसी थिए । पराल बालेर सुँगुर पोल्नु भो बाले । दिदी घाँस काट्न बारीमा गएकी थिइ । मैले दुइ घैंटो पानी बोकें । बाजेबज्यै भेडाको ऊनमा मिसिएको कुरो छुट्टाउँदै हुनुहुन्थ्यो ।
रमाउँदै हामीले सुँगुरको रगत खाइम् । बाले दिदीलाई आफ्नो भागको रगत थप्दिनु भो । आमाले नि थप्दिनु भो । बाजेबज्यैले पनि दिदीलाई ‘ल’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । दिदीलाई भाइहरु र मैले चाहिँ दिएनम् । बरु दिदीले हामीलाई दिनु भो । डेक्चीभरि भात पाक्यो । कराइभरि मासु पाकेको थियो । धेरैपछि मासु र भात थपी–थपी खायौं हामीले । खुसी मनले ।
दिउँसो दिदीले आफ्नो सबै कपडा बोराको झोलामा कोची । घुँडामा फाटेको हरियो रङको एउटा मेक्सी । धरधरी च्यातिएको टाउको छोप्ने एउटा रुमाल । बैठक कोठाको एक कुनामा झुन्डाएर छोडी । मलाई दिदीको फोटोजस्तै लाग्यो । ती दुबै दिदीको कपडा। तुर्लुङ झुन्डिएको ठूलो फ्रेमजस्तो भित्तामा । त्यो मेक्सी । त्यो रुमाल । अनि मैले दिदीको मेक्सी र रुमाल एक–एक पटक छोएँ । फेरि दिदीको मेक्सी हेरें । रुमाल हेरें । दिदीको माया एकाएक धेरै लागेर आयो । माया लागेर दिदी भनें ।
अधिकारी बाजेको बास र सिसौले पश्चिमको घाम छेकिदियो साँझको । बाँसको रुखमा सारौंहरु च्याङच्याङ गर्न लागे । अधिकारी बाजेले दुइ–चारवटा कागती टिप्न अह्राए मलाई । म कागतीको बोट पछाउँदै हिडें । आमा ! कस्तो फलेको कागती । मैले दुइटा कागती टिपें ।
अधिकारी बाजेको घरमा कमलरी बसेदेखि अठार महिनामा चारपटक हाम्रो घरमा आई दिदी । एकपटक माघीमा अधिकारी बाजेले नै पठाएका रे। बाँकी तीन पटक भने भागेर।
एक दिन हाम्रो कालो भाले म¥यो । आँखा पाक्ने रोगले । बाआमा, बाजे, बज्यै सबैले भालेको मासु दिदीलाई लगेर पठाए मलाई । म मासु बोकेर अधिकारी बाजेको घर हिडें। दिदीले कमलरी बस्न जाने दिन । हाम्रो घरको बैठकमा झुन्डाइ छोडेको दिदीको मेक्सी र रुमाल सम्झिदै हिडें । म बाटाभरि । घरि सम्झिएँ दिदीले के गर्दै होली यतिबेला? घरि सम्झिए काँ गाकी होली यो समय दिदी ? म पुगें भने कत्ति खुसी होली । बिचरी दिदी । म बाटामा खुसी भएर भन्दा नि दुःखी भएर पो हिडें । लुखुर लुखुर ।
दिदीले सबभन्दा पहिले बाजे र बज्यैको हालखबर सोधी । बा, आमा र भाइहरुको नि सोधी । अनि काली गाई, भेडाहरु, पोहोर सिसनियाँबाट लिएको सुँगुर पाठा । घरको उल्टे माउ । कुवा छेऊको मेवाको रुख । दिदीले पोहोर आफै रोपेको गुलाबको खबर नि सोधी ।
कोठामा पुगेपछि दिदीले टुक्की सल्काई । टुक्कीको उज्यालोमा दिदीको अनुहार धित मर्ने गरि हेरें मैले । दिदीको गालाको कोठी उस्तै कालो–कालो थियो । दिदीका आँखा उस्तै लागे मलाई । नाकमा भने खै के भएछ दिदीको । कालो–कालो धब्बा थियो ।
‘उह मुरघक शीकार हो ?’
मैले टाउको हल्लाएर हो भनें । दिदीले मासुको पोका परतिर सारी । फेरि मसिनो स्वरमा दिदीले भनी–
‘मै नि खइम यी शीकार ।’
दिदी र म सुत्न भनी पल्टिइम् ओछ्यानमा । म खुब खुसी–खुसी थिए । धेरैपछि दिदीसँग सुत्न पाएकोमा ।
टुक्की निभेपछि अँध्यारो भो । हामी सुत्ने कोठा । म दिदीको नजिक–नजिक सुत्न चाहन्थे। तर दिदी त रुन पो थाल्नु भो । सुक्क–सुक्क । घिक–घिक ।
‘डिडी । डिडी ।’
ओहो ! जब बालाई एक्लै देखें । मन मुटु दुखेझैं भयो । खुत्रुकै भयो । दिदीले चाँडै उन्मुक्ति पाउली भन्ने आस गरेको थिएँ । अच्चम । बा त घरभित्र पसेर रुन पो लाग्नु भो ।
बा केहीबेर धर्धरी रुनु भो । बाजेबज्यै, आमा, भाइ र म हेरेको हे¥यै । बिस्तारै बाको आँसु थामियो । बाको थामिएर के गर्नु । अब आमाको खस्दै थियो । बाजेको खस्दै थियो। बज्यैको खस्दै थियो । मेरो अघि नै भूइँ पुगिगयो । भाइहरु पिलपिल गर्न सिक्दैथे कुनामा ।
बाले निसाना ताकेरै हिर्काउनु भो । हाम्रो मुटुमा आँसु झार्ने तीर । अचानक बिहानबाट दिदी हराइ रे। रिसाउँदै अधिकारी बाजेले बालाई भने रे । दिदीले खै कुन अधियारा थारुको भूँडी बोकी थिइ रे । घरमा देखिने लाजले दिदी भागेकी हो रे । खै कहाँ पो भागी रे ?
भेटिदै भेटिइन दिदी । कतै पनि भेटिइन । हामीले काँ–काँ खोजिनम् ? जताततै उधुम गरिम् । अझै नि खोजिरा’छम् । काँ भेटिली दिदी ? कहाँ देखिली दिदी ? आँखाको नानीअघि ठिङ्ग उभिएर हाँसेको हेर्न मन छ अझै । देख्न मन छ अझै । दिदी कहाँ भेटिएली? कहिले भेटिएली । एउटा आकाशे बेलीको त्यान्द्रो छ हाम्रो मनभित्र । धेरै पहेंलो । न त सुक्छ । न त जाग्छ ।
#कथा #नेपाली साहित्य